सत्य साईबाबा ः मुक्तिको मार्ग
आज श्री सत्य साईबाबाको ९०औँ जन्म दिन । उहाँको अवतार २३ नोभेम्बर १९२६ मा भएको थियो भने उहाँ अप्रिल २४, २०११ मा समाधिस्थ हुनुभएको थियो । भगवान्को अवतार समय–समयमा भई राखेको सत्यता हामीले त्रेता युगमा राम र द्वापरमा कृष्ण भगवान्को अवतारमा प्रकट भएको सुनेका हौँ तर एउटा कुरा यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने त्रेता र द्वापर युगमा अवतरित भगवान् राम कृष्णलाई पनि सबै मानिसले भगवान्को रूपमा हेरेको बुझेको पाइँदैन । किनकि मानिसको जन्म ८४ लाख योनीभित्र पर्ने र यो जन्म अति नै दुर्लभ भएको, यस संसारको सर्वश्रेष्ठ, चेतनशील प्राणीको रूपमा पाएकोले खोज, तर्कभित्र अग्रसर बन्छ र भगवान्को अवतारलाई सहजै स्वीकार्न र विश्वास गर्न सक्तैन । यही तर्क, खोजभित्र रुमलिएर एकदिन अन्त्यमा भगवान्लाई नै सम्झेर यस देहलाई त्याग्नुपर्ने दिन आउँछ । भनाइको तात्पर्य भगवान्प्रति पूर्ण विश्वास लिन नसक्नु हामी मान्छेको दुर्भाग्य हो । हामीले वर्षौं–वर्ष भागवत, पुराण, शिव पुराण, रामायण आदि सुन्दै पढ्दै आएका छाँै तर खोई हाम्रो आस्था र विश्वास बढेको ? मन्दिर जान्छौँ, धाउँछँौँ, त्यतिखेर कति पवित्र भावना राखेर भगवान्को चरणमा नतमस्तक बन्छाँै । त्यही भावना मन्दिर बाहिर पनि सदा सर्वदा हृदयभित्र भइदिएको भए ? सायद हत्या हिंसा छल कपट, फट्याईं, चोरी डकैती हुँदैन थियो होला ।
मान्छेको इच्छा चाहनाले परकाष्ठा नाघ्दा नै हरेक दुर्घटना भइराखेको सत्यतालाई बुझ्न आवश्यक छ । यही भावनाले र इच्छा चाहनाले गर्दा नै मान्छेले बारम्बार जन्म लिनुपरेको सत्यतालाई हामी मानिसले बुझ्नुपर्छ । किनकि आफ्नो कर्तव्य, कर्ममा उन्मुख बन्न अर्जुनलाई भगवान् श्री कृष्णले भन्नुभएको छ । जसलाई भनेको बुझेको कुरा तल उद्धृत हुनेछ ।
आफ्नो अवतार विषयमा भगवान् श्री सत्य साईबाबाले भन्नुभएको थियो– मैले चार हातमा शङ्ख, चक्र, पद्म र गधा लिएर आएको भए तिमीहरूले मलाई म्युजियममा राखेर पैसा उठाउँथ्यौँ, साधारण मान्छे भएर आएको भए तिमीहरूले मैले दिएको उपदेशको पालना गर्दैनौ थियौँ, त्यस कारणले यस रूपमा म आएको छु । साथै अवतारकै विषयमा बाबाले अहिले त्रेता, द्वापर युगमाझैँ असत्यतर्फ उन्मुख मान्छेप्रति कारबाही गर्ने हो भने यस संसारमा कोही पनि जिउँदो रहने छैन, त्यस कारण मैले सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसाको सन्देश बोकेर सोही पथमा तिमीहरूलाई हिँडाएर सपार्न र मुक्तिको मार्ग देखाउन नै मेरो अवतार जीवनको लक्ष्य हो । उहाँले आजको विश्वको कुना कुनामा रहेको जन्मेका मान्छेमा यो सन्देश छोडनुभएको छ र आज उहाँको यस बाटोमा हिँड्ने भक्तहरूले उदाहरण्ीाय सेवा (विश्वभर नै आध्यात्मिकताको ज्ञान, निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि सेवामूलक कार्यहरू) गर्दै आएका छन् । मान्छेको सेवा नै माधव (भगवान्) सेवा हो भनी बाबाले भन्नुभएको छ तर त्यो सेवा निश्चल, पवित्र, स्वच्छिक हुनुपर्छ किनकि कृष्ण भगवान्ले भन्नुभएको छ– ‘आफ्नो कर्म गर फलको आशा नराख । ’ यही प्रसङ्गमा श्री सत्य साईबाबाले भन्नुभएको छ, तिमी जुन काममा फलको आशा राख्छौँ, त्यो आशाले वा तिम्रो राम्रो कामले पुरस्कार पाउन योग्य हुन्छौँ । राम्रो काम गर वा नराम्रो काम दुवैमा तिमीले पुरस्कारको भागी बन्नुपर्छ । राम्रो काम ग¥यौँ र गरेबापत आशाको (फलको) चाहना हुन्छ भने तिमीले त्यसको पुरस्कार यस जन्ममा लिन पाएनौँ भने अर्को जन्म लिनका लागि तिमीले जन्मनै पर्छ । अनि नराम्रो काम गर्छौ भने त्यसको सजाय (पुरस्कार) यस जन्ममा पाएनौँ भने पनि अर्को जन्म लिनुपर्छ । अतः भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई फलको आशा नराख भन्नुभएको कुरा हामी मान्छेले स्पष्ट बुझ्न सक्नुपर्छ ।
भगवान् श्री सत्य साईबाबा सर्व धर्म प्रिय देवता हुनुहुन्छ । साई धर्म होइन साई मुक्तिको बाटो हो । त्यो बाटो जुन हामीलाई दिनुभएको छ । बाटोमा हिँड्न हामीले पवित्र निश्चल कर्म गर्न सक्नुपर्छ । यही प्रसङ्गमा भगवान् बाबाले एउटा चुम्बक र फलामको उदाहरण दिनुभएको छ । फलाममा धुलो मैलो जमेको छ भने चुम्बकले तान्न सक्तैन अनि हामी चुम्बकले आफ्नो शक्ति गुमाएछ भनेर भन्छौँ । त्यस्तै तिम्रो हृदयमा फोहरमैला छ भने त्यहाँ भगवान्को बास हुन सक्तैन, त्यसैले तिम्रो हृदय स्वच्छ पवित्र बनाउ । ईश्वरत्व, परमात्मा तर्फ अग्रसर होऊ । प्रेम ईश्वर हो, ईश्वर प्रेम हो । प्रेम, भक्तिले ईश्वरलाई समेत आफ्नो हृदयमा कैद राख्न सक्छौँ । उहाँले भन्नुभएको छ ‘तिमीले आ–आफ्नो ईष्ट देवतालाई पूजा गर आखिरी त्यो म कहाँ नै आइपुग्छ । ’ बाबाको यस भनाइले पनि ईश्वर, भगवान् एउटै छ । अनि स्पष्ट छ, समय अवस्थानुसार अवतारको नाम विभिन्न हुन्छन् ।
हामी यस कलियुगमा मानिस भएर जन्मेका छौँ । यो जन्म महŒवपूर्ण छ । फेरि मान्छेकै रूपमा जन्म लिन दुर्लभ छ । संसारको सृष्टिसँगै मानिसले ज्ञान–विज्ञानको खोजी तर्क वितर्क गरेका छन् । ईश्वरत्व प्राप्त हाम्रा क्रृषिमुनिहरूले गरेका तपस्या त्यागबाट पनि हामीले यी कुरा बुझेर दैनिक जीवनमा सत्यको मार्गमा हिँड्नु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जस्ता इच्छा, चाहना, आदतलाई बलि दिन सक्नुपर्छ । संसारको दुःख सुख, चौरासी लाख योनीको जन्ममा बारम्बार आउने वातावरणको जीवन शैली बनाउनलाई पक्कै पनि यो जन्म भगवान्ले दिनुभएको होइन । यस मूल रहस्य, सत्यतालाई हामीले बुझ्नै पर्छ । अन्तमा ईश्वरको नाम र शरणमा पुग्नै पर्छ । बाबाको ९०औँ जन्म दिनको यस पावन अवसले सबै मानवको कल्याण होस् ।